ब्रशलेस मोटर: यी मोटर्सको बारेमा तपाईंलाई के थाहा हुनुपर्छ नि: शुल्क हार्डवेयर
इसहाक | | इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरू, ड्रोन
तपाईंले सम्भवतः को बारे मा सुनेको छु मोटर brushless। यो शब्द धेरै उत्पाद विवरणमा हेर्न सामान्य हो। उदाहरण को लागी, मा ड्रोन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि धेरैसँग यस प्रकारको इलेक्ट्रिक मोटर्स छन्। वास्तवमा, केहि उत्पादकहरूले यसलाई सम्भावित ग्राहकहरूको लागि दावीको रूपमा प्रयोग गर्छन्, किनकि उनीहरूसँग उनीहरूका सुविधाहरू छन्।
तर यो brushless मोटर के हो? त्यहाँ के फरक छन् सम्मान मा अन्य प्रकारको DC मोटर्स। सबै ती सबै संदेह र अधिक म तिनीहरूलाई यो लेख मा स्पष्ट गर्न कोसिस गर्दछु ...
अन्य प्रकारका साथ इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरू, यी मोटरहरू निर्बाध रूपमा तपाईंको DIY परियोजनाहरूसँग एकीकृत गर्न सकिन्छ अर्डिनो बोर्ड र अन्य
1 Brushless मोटर के हो?
1.1 एक brushless मोटर र अपरेशन को अंशहरू
2 जहाँ एक brushless मोटर किन्न
Brushless मोटर के हो?
Brushless मोटर भागहरु
ब्रश मोटर्सको लागि प्रतिस्थापन ब्रशेस
Un brushless मोटर, वा brushless मोटर, यो सामान्य र हालको इलेक्ट्रिक मोटर हो, तर यसले मोटरको ध्रुव परिवर्तन गर्न ब्रशेस प्रयोग गर्दैन। यसले केही प्राविधिक समस्याहरू हटाउँदछ र तिनीहरूलाई प्रतिस्थापन हुनबाट रोक्दछ। यसैले यो दावीको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, यद्यपि यो सत्य हो कि यो केही संदिग्ध दाबी हो, किनकि प्रायः हालका मोटर्स प्राय: ब्रश रहित छन्।
को पुरानो इलेक्ट्रिक मोटर्स हो उनीहरूसँग यस प्रकारका ब्रशहरू थिए, केही तत्वहरू जसले घिसार्छन् र मोटरको प्रदर्शन घर्षण गरेर घटाउँछ, उच्च तापमान उत्पन्न गर्दछ, लगाउँछ, आवाज, र यस मर्मतसम्भार मोटर भित्र उत्पन्न कार्बन धूलो सफा गर्न आवश्यक छ (जुन केवल अपरेशनमा बाधा पुर्‍याउन सक्दैन, यो प्रवाहकीय पनि हुन सक्छ र विद्युतीय समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ) र थकित ब्रशेस बदल्नुहोस्।
यसैले पहिलो ब्रशलेस मोटर्स विकसित भयो। क्षेत्र मा पहिलो एसिन्क्रोनस एसी मोटर्स, र पछि डीसी जस्ता अन्य मोटरहरूमा लीप बनाउँदै, जुन हामीलाई यो ब्लगमा सब भन्दा चासो राख्दछ।
जे होस् सुरुमा ती उपन्यास र अधिक महँगो थिए उत्पादन गर्न, टेक्नोलोजी र इलेक्ट्रोनिक्सको प्रगतिले अब उनीहरूलाई आर्थिक उत्पादन गर्न सम्भव बनाएको छ। यद्यपि यसको नियन्त्रण केही अधिक जटिल हुन सक्छ। यद्यपि ESC गति नियंत्रकहरूले यी समस्याहरू हटाएका छन् ...
हाल, एसी मोटर्स भित्र छ टोलीहरूको भीड घरेलु र औद्योगिक, साथै सवारी साधनहरू, आदि। CC हरूको लागि, तपाईं तिनीहरूलाई अप्टिकल डिस्क पाठकहरू, कम्प्युटर फ्यानहरू, ड्रोनहरू, रोबोटहरू, र एक लामो आदिमा पाउन सक्नुहुन्छ।
एक brushless मोटर र अपरेशन को अंशहरू
सच्चाइ यो हो भागहरु एक brushless मोटर को धेरै सरल छ। इलेक्ट्रिक मोटर्समा लेखमा वर्णन गरिएको चुंबकीय ढालहरू सहित स्टेटर, र रोटर जुन चुम्बकीय क्षेत्रको आवेगका कारण घुम्नेछ।
तर तिनीहरूलाई सञ्चालन गर्ने तरिका हो यो अन्य ब्रश गरिएको AC र DC मोटर्स भन्दा अलि फरक छ। जहाँसम्म, धेरै अपरेटिंग सिद्धान्तहरू र सुविधाहरू समान हुनेछन्।
चीजहरू सजिलो बनाउनको लागि ESC (इलेक्ट्रोनिक स्पीड कन्ट्रोलर), कि छ, नियन्त्रणकर्ताहरूले घुमाउन को लागी एक ब्रस मोटरको वाइन्डि ofको ध्रुवीयता परिवर्तन गर्न सक्षम हुन। तिनीहरूले द्वारा सजीलो नियन्त्रण अनुमति PWM, माइक्रोकन्ट्रोलरहरूसँग जस्तै अर्डिनो बोर्डमा।
ESC मोड्युलहरूको इलेक्ट्रोनिक तत्वहरू मोटरको लागि अभिनय गर्न सक्षम छ प्रयोगकर्तालाई धेरै समस्या बिना नै। इन्जिन र पावरको प्रकारमा निर्भर गर्दै तपाईंलाई एक प्रकारको वा अर्को आवश्यक हुन्छ चालक, जस्तो कि हामीले अन्य लेखहरूमा विश्लेषण गरिसकेका छौं।
याद गर्नुहोस् कि तपाईले प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ MOSFET ट्रान्जिस्टरहरू यसको ख्याल राख्न यदि तपाईंसँग यीको मोड्युल छैन भने। मूल रूपमा ड्राइभर वा ESC एक सर्किट हो कि ट्रान्झिस्टरको ध्रुवीयता वैकल्पिक गर्न को लागी मोटर को विद्युत आपूर्ति ध्रुव परिवर्तन गर्न को लागी ट्रान्जिस्टरहरु लाई धन्यवाद।
entre फाइदा एक brushless मोटर हाइलाइटहरूको:
उत्तम गति - टोक़ अनुपात। तसर्थ, तपाईं तिनीहरूबाट अधिक प्रदर्शन कोर्न सक्नुहुन्छ।
उत्तम गतिशील प्रतिक्रिया।
अधिक ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा बचत गर्न। विशेष गरी ब्याट्री संचालित उपकरणहरूमा महत्त्वपूर्ण।
थोरै तताउने थप अपव्यय प्रणाली वा अत्यधिक पोशाकको आवश्यकता पर्दैन।
अधिक टिकाऊ, किनकि यसलाई यति धेरै रखरखावको आवश्यकता पर्दैन, नता यसमा घर्षण वा लगाव छ।
कम आवाज कुनै चीजलाई नछोई ती शान्त हुन्छन्।
उच्च गति, अनुप्रयोगहरूको लागि आदर्श जहाँ यो महत्त्वपूर्ण छ, जस्तै रेसि। ड्रोनहरू।
कम्प्याक्ट उनीहरूसँग भएको टोक़को बावजुद, तिनीहरू अरू कम्प्याक्ट भएका चीजहरू ब्रश गरिएको मोटर भन्दा बराबर छन्।
मर्मत बिना। तपाईं ब्रश लगाउन को लागी inopportune रोक्ने छैन, वा स्पेयर पार्ट्स किन्न को लागी, धूलो उत्पन्न आदि सफा गर्न को लागी, आदि।
अवश्य पनि, brushless मोटर्स सबै मा राम्रो छैन। उनीहरूको साना बच्चाहरू छन् हानि:
लागत, यो ब्रश मोटर्स भन्दा अलि बढी छ। जे होस्, हालको टेक्नोलोजीको मतलब यो हो कि तपाईं राम्रो मूल्यमा ब्रशलेस मोटर किन्न सक्नुहुन्छ।
यसलाई नियन्त्रण गर्न तपाईलाई ड्राइभरहरू वा नियन्त्रकहरूको आवश्यक्ता पर्दछ जसले तपाईं रोटेशनलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। यो अन्य अवस्थामा जस्तै यो म्यानुअल तरिकाले गर्न असम्भव छ।
त्यो भए पनि, तिनीहरू ती हुन्ई उद्योग मा थोपेको छ र यसले उनीहरू मध्ये कुनै एक लाई छनौट गर्न लायक बनाउँदछ ...
जहाँ एक brushless मोटर किन्न
अन्तमा, यदि तपाईं चाहनुहुन्छ एक brushless मोटर किन्नुहोस् तपाईंको ड्रोन मर्मत गर्न, वा तपाईंको निर्माता परियोजनाको लागि, तपाईं तिनीहरूलाई विशेष स्टोरहरूमा वा अमेजनमा फेला पार्न सक्नुहुनेछ। उदाहरण को लागी, यहाँ केहि उत्पादनहरु छन्:
DroneAcc drones का लागि 4x ब्रशलेस मोटर्स
स्केटबोर्ड / इलेक्ट्रिक बाइक को लागी Viviance ब्रशलेस मोटर
स्केटबोर्ड / इलेक्ट्रिक बाइकको लागि एलोमेजोर ब्रशलेस मोटर
12v 150w brushless मोटर
क्रेजपोनी-युके ब्रशलेस वाटरप्रूफ
लेखको पूर्ण मार्ग: नि: शुल्क हार्डवेयर » इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरू » ब्रशलेस मोटर: तपाईलाई यी मोटर्सको बारेमा के थाहा हुनुपर्दछ
NVIDIA जेट्सन नानो: एसबीसी न्यूरल नेटवर्क र एआई संग विकास को लागी